Wụnye Linux Kernel 5.16 na OS 6 elementrị
Saturday, January 22, 2022 by Jọshụa James
Linux kernel 5.16 nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, nkwado na nchekwa. Mwepụta kernel Linux 5.16 nwere nnukwu atụmatụ ọhụrụ, FUTEX2, ma ọ bụ futex_watv(), nke chọrọ imeziwanye ahụmịhe egwuregwu Linux, na-eto nke ọma na ọdụ ụgbọ mmiri Linux ka mma maka egwuregwu Windows na-eji mmanya. Mmelite ndị ọzọ ahụla ka edere gụnyere njikwa mkpọkọ ederede emelitere, ọrụ…
Categories os nke osiri Tags OS 6 nke mbu, Linux kernel
Wụnye Liquorix Kernel na OS 6 elementrị
Liquorix Kernel bụ Linux Kernel n'efu, nke mepere emepe maka kernel nke nwere OS elementrị. Ọ nwere ntọala omenala yana atụmatụ ọhụrụ wee wuo ya iji nye ahụmịhe desktọpụ na-anabata nke ọma, ọkachasị maka ngwaike ọhụrụ. Liquorix Kernel bụ ama ama n'etiti Linux Gaming, nkwanye, na ultra-latency chọrọ…
Categories os nke osiri Tags OS 6 nke mbu, Linux kernel, Liquorix kernel
Wụnye XanMod Kernel na OS 6 elementrị
Saturday, January 22, 2022 Fraịde, Jenụwarị 21, 2022 by Jọshụa James
XanMod bụ Linux Kernel bụ n'efu, mepere emepe-isi mmalite maka kernel ngwaahịa nwere OS elementrị. Ọ nwere ntọala omenala yana atụmatụ ọhụrụ wee wuo ya iji nye ahụmịhe desktọpụ na-anabata nke ọma, ọkachasị maka ngwaike ọhụrụ. XanMod bụ ama ama n'etiti Linux Gaming, nkwanye, na ultra-latency chọrọ ma na-anya isi na…
Categories os nke osiri Tags OS 6 nke mbu, Linux kernel, XanMod kernel
Wụnye Linux Kernel 5.16 na Pop!_OS 20.04
Categories Pop! _OS Tags Linux kernel, POP! _OS 20.04
Otu esi etinye kernel Liquorix na Linux Mint 20
Liqourix Kernel bụ free, open-source general-based Linux Kernel alternative to the stock kernel with Linux Mint 20. Ọ na-egosipụta ntọala omenala na atụmatụ ọhụrụ ma wuo ya iji nye ahụmahụ desktọọpụ na-anabata ma dị mma, karịsịa maka ngwaike ọhụrụ. Liquorix Kernel bụ ama ama n'etiti Linux Gaming, nkwanye, na ultra-low…
Categories Mint Linux Tags Linux kernel, Mint 20 Mint Linux, Liquorix kernel
Otu esi etinye Linux Kernel 5.16 na Linux Mint 20
Categories Mint Linux Tags Linux kernel, Mint 20 Mint Linux
Otu esi etinye Linux Kernel 5.16 na Rocky Linux 8
Thursday, January 13, 2022 Wenezdee, Jenụwarị 12, 2022 by Jọshụa James
Categories Nkume linux Tags Linux kernel, Nkume Linux 8
Otu esi etinye kernel Liquorix na Rocky Linux 8
Fraịde, Jenụwarị 14, 2022 Monday, December 27, 2021 by Jọshụa James
Liqourix Kernel bụ Linux Kernel n'efu, nke mepere emepe maka kernel nke ejiri Rocky Linux butere ya. Ọ nwere ntọala omenala yana atụmatụ ọhụrụ wee wuo ya iji nye ahụmịhe desktọpụ na-anabata ma dịkwa mma, ọkachasị maka ngwaike ọhụrụ. Liquorix Kernel bụ ama ama n'etiti Linux Gaming, nkwanye, na ultra-low…
Categories Nkume linux Tags Linux kernel, Liquorix kernel, Nkume Linux 8